Imibala emi-5 emihle yokwenza imibala yamehlo ansundu - Ubuhle
Imibala emi-5 emihle yokwenza imibala yamehlo ansundu
Asikholelwa ebuhleni obubekiwe noma 'emithethweni' ezungeze lezi zingxenye. Kepha uma kukhulunywa ngokudlala umbala wakho wamehlo, ezinye izisekelo zamasondo wombala empeleni ziwusizo olukhulu. Thatha umbala onsundu: Uma ubhangqwe nezimpawu ezinhle kakhulu zamehlo ezinsundu, ungakhipha ukujula nobukhulu obufana nobani. Sithinte umculi wezimonyo uVanessa Ungaro we ULauren + Vanessa ukwaba ukuthi yimiphi imibala yokwakheka kwamehlo eveza izici ezimangalisa kakhulu kuzo zonke izinhlobo zobunsundu. Funda ukuze uthole ama-shades amahle kakhulu wombala wamehlo akho. (Ne-pssst ... uma kwenzeka ufuna ukwazi noma ufike lapha ngephutha, siphinde salandela imibala emihlanu emihle yokwenza amehlo ombala oluhlaza okwesibhakabhaka futhi okuluhlaza okotshani .)
Imibala Engcono Kakhulu Yokwenza Amehlo Aluhlaza: I-Warm Rust Eyeshadow
Icebo lokuthuthukisa amehlo ansundu ukuqala ukhombe ukuthi imiphi imibala equkethe wena. 'Enye yezimfihlo ezigcinwe kahle ngabadwebi bezimonyo ukuthi ukugwedla isithunzi esinsundu esifudumele esinama-undertones ethusi kulayini wokuqhuma kuzokhipha ukukhanya okuluhlaza negolide emehlweni ansundu,' kusho u-Ungaro. Amacebo obomvu emthunzini azophikisana nanoma yikuphi okuluhlaza noma igolide, okwenza kubonakale kumangalisa ngokwengeziwe. Ukubukeka okuqine kakhulu, u-Ungaro uncoma ukuthi kulandelwe i-eyeshadow nge-jet black liner kulayini wamanzi ukwengeza ukujula.
Lesi sithunzi se-velvety siza ngephalethi ehlelwe ngombala, ngakho-ke ungadlala uzungeze umthunzi ngamunye onsundu ngakho konke ukufaka isicelo.
I-L'Oréal Paris Colour Riche Shadow Quad ngoba Ngifanele , $ 7, drugstore.com
Lesi sithunzi esinombala ojulile sinezici ezicwebezelayo kuso ukuze sibe nomphumela okhanya ngokwengeziwe.
INars Shimmer Eyeshadow eLola Lola , $ 25, narscosmetics.com
Ngokuqedela okuthambile, kwe-matte, leli zwi eliphansi elibomvu le-eyeshadow lingenza noma yimuphi umthunzi wamehlo ansundu pop.
Clinique Konke Mayelana Nesithunzi Esingashadile ku-Chocolate Covered Cherry , $ 16, clinique.com
Izithombe ze-Getty 5/21
Imibala Engcono Kakhulu Yokwenza Amehlo ansundu: I-Purple Eyeshadow
'Yonke imibala ephephuli, kusuka ku-isitshalo seqanda kuya ku-lavender, isebenza ngamehlo ansundu ngoba ikhipha umbala onsundu kunabo bonke kuma-irises akho,' kusho u-Ungaro. Akukona konke lokho, umehluko ophansi ophephuli ungenza abamhlophe bamehlo akho babonakale beqhakazile, bakwenze ubukeke uphapheme ngokwengeziwe.
Shanela umthunzi wendawo maphakathi nesivalo sakho, phansi kwesobunxele ngokugqamile, bese kuthi iplamu engezansi kwesokudla emakhoneni nolayini ophansi wokuqhuma ukuze wenze amehlo akho aqhume.
Iphalethi likaDior 5 Couleurs Eyeshadow eVictoire , $ 62, dior.com
Yenza Phakade 7/21
Kubukeka kunesibindi epanini, kepha lesi sithunzi samehlo singahlanganiswa kalula sibe ngumbala onombala omncane, ngakho-ke ungakhetha ubukhulu obukhethayo.
Yenza i-Ever Eye Shadow ku-isitshalo seqanda , $ 21, izimanga.com
Faka isicelo somile noma usebenzise ibhulashi elincishisiwe ukwenza le eyeshadow ibonakale icwebezela isikhumba sakho.
I-Chanel Ombre Essentielle Soft Touch Eyeshadow ePulsion , $ 30, chanel.com
Izithombe ze-Getty 9/21
Imibala Engcono Kakhulu Yokwenza Amehlo ansundu: I-Eyeliner Ejulile ye-Bronze
I-bronze ngomunye wemibala eguquguqukayo kakhulu uma kukhulunywa ngokwenza izimonyo zamehlo, kepha i-Ungaro ithi ibukeka icwebezela ikakhulukazi ngamehlo ansundu ngaphandle kokuhlangana kakhulu. 'Smudge i-liner yethusi emnyama ezungeze iso lakho kusuka kulayini ophezulu wokuqhuma uye ezansi ukuze uthole umphumela ojulile, oqinile,' usho kanje. Ukuze uthole umphumela omuhle ngokwedlulele, zama i-liner yethusi enokucwebezela okuncane kuyo — uzomangala ukuthi lo mthunzi ofudumele ungakuguqula kanjani ukubukeka kwakho konke.
Imibala Engcono Kakhulu Yokwenza Amehlo Aluhlaza: I-Eyeliner Ejulile ye-Bronze
Le-eyeliner ye-2-in-1 Lancôme inesiphetho esinamaphiko ukuze uthinte kalula ukwakheka kwamehlo akho ngokubukeka okuhlala kakhudlwana.
I-Lancome Le Stylo Eyeliner ehlala isikhathi eside engenamanzi eBronze Riche , $ 27, lancome-usa.com
zingaki iziqephu ze-night stalker netflix
Khuphula umfutho welineri yethusi ngokuyimatanisa nesithunzi sokhilimu sokuxhumanisa.
I-Tarte Double Duty Beauty I-Eye Architect Double Ended Liner neShadow eBronze , $ 24, ulta.com
Lo eyeliner oyithanda kakhulu inkolo ushibilika kalula futhi uhlala amahora amaningi, okwenza ikulungele ukwengeza ulayini wakho wamanzi.
IStila Smudge Stick Eyeliner Engangenwa Manzi e-Lionfish , $ 22, ulta.com
Imibala Engcono Kakhulu Yokwenza Amehlo ansundu: I-Metallic Teal Eyeliner
Ngokwehluka okunamandla okuqhamuka namehlo awela ngasekugcineni kobumnyama be-spectrum yombala, i-Ungaro incoma ukusebenzisa i-eyeliner yetiye yensimbi. Uyachaza: 'Ukufaka umcibisholo wetiye entanjeni engezansi yamehlo akho ngezingubo ezimbalwa zemascara emnyama kunika amehlo ansundu ukubukeka okumangazayo. Vele uqiniseke ukuthi gwema la maphutha ayisikhombisa ezambiwa ngokuzayo uma uzama.
Uthanda ukubukeka kukaNyong'o? Izindaba ezimnandi. Lona yi-eyeliner ngqo ayigqoke esithombeni esedlule. Yifomula eliketshezi nesicelo esifakwe i-foam esicijile okwenza kube lula ukuthola umugqa oqonde kakhulu.
ILancome Artliner 24H Liquid Liner eTurquoise , $ 31, lancome-usa.com
Ukubola KweDolobha 15/21
Njengoba igama lalo mboni wezwi liphakamisa, ungayigqoka usuku lonke — nobusuku bonke — ngaphandle kokwesaba ukuncibilika kokwenza izimonyo.
I-Urban Decay 24/7 Ipensela Yamehlo E-Glide-On eJunkie , $ 20, urbandecay.com
Gqoka i-pop yayo kulayini wakho ongaphezulu wokuqhuma, noma uyihlanganise nesivalo sakho usebenzisa ithiphu le-smudger ngokubukeka okugqamile.
CoverGirl Queen Collection Vivid Impact Eyeliner eJade , $ 5, ikhava.com
Imibala Engcono Kakhulu Yokwenza Amehlo Aluhlaza: I-Golden Cream Shadows
'Ithusi elikhanyayo likhipha ukucwazimula kwamehlo ansundu, ikakhulukazi uma linamathoni egolide,' kusho u-Ungaro. Ngokusebenzisa umbala wethusi noma we-champagne onama-undertones aphuzi, uzokhipha ngisho nokuncane okuncane ukusikisela kwe-hazel emehlweni ansundu, kubenze babonakale bephila ngokwengeziwe.
Sithanda izimbiza ze-MAC Paint ngoba akukho lula ukuzisebenzisa. Sebenzisa iminwe yakho ukuyiswayipha phezu kwesembozo sakho, ibhulashi le-eyeshadow ukuyinamathisela ngezinye izithunzi, noma ibhulashi le-angled liner ukuze uligqoke eceleni kommanzi wakho.
Imbiza yepende ye-MAC Pro Longwear e-Indianwood , $ 22, maccosmetics.com
UCharlotte Tilbury 19/21
Igama lisho konke. Lapho le fomula yegolide yegolide ifaka izinkophe zakho, usala nomvuzo okhazimulayo okhanyisa yonke indawo yamehlo.
Amehlo kaCharlotte Tilbury Athi I-Mesmerise Cream Eyeshadow eBette , $ 32, charlottetilbury.com
Bazulazula uBuhle 20/21
I-Wand yesicelo esisebenziseka kalula ikuvumela ukuthi usebenzise lesi sithunzi sokhilimu njengombala wamehlo wonke noma i-eyeliner, kuya ngemizwa yakho.
I-Wander Beauty Exquisite Eye Liquid Shadow eBronze , $ 26, wanderbeauty.com
Phina ngokuhamba kwesikhathi!
uhlaka oluncane lombhede olunenhloko yebhodi
ukuphuma kwesisu, ukulinda isikhathi esingakanani
izitayela zokuvikela izinwele zase-afrika zaseMelika